Ukupakisha kwe-CBD, iglasi yeglasi yeglasi, i-60ml ye-E-liquid Bottle, i-CBD ibhotile yejar-ANKE
Ulwazi malunga nenkampani ANKE Packing Co., Ltd
Wamkelekile ukuthumela kuthi iinkcukacha zakho. Emva koko sinokubuyisela ngqo isibonelelo sakho kunye neenkcukacha ezithe kratya kwimfuno yakho…
Ibhotile yeglasi ene-bamboo cap-ANKE Ukupakisha
Amber iglasi ingqayi kunye aluminiyam ikepusi-ANKE Ukupakisha
Ngaba unayo i-CBD Balm / Cream enombala okhanyayo? Ngaba ucinga ukuba ngowuphi umbala wengqayi olungele iimveliso ezinemibala ye-CBD? Umbala we-amber lolona khetho lufanelekileyo ngoku. Ithe tyaba, abantu banokubona iimveliso zangaphakathi. Kwaye umbala we-amber unokwenza iimveliso ezinemibala zikhangeleke ngcono. Abantu ...
Yenza ngokwezifiso ukuPrinta kwe-Aluminium Shinny Plastic Bag-ANKE Ukupakisha
Izolo, sazise ibhegi yephepha okwakhiwa ngephepha le-CBD eqinileyo. Sikhankanye oko kwimizobo elula ye-hemp kunye neentyatyambo. Olu lwazi lukhetho olungcono. Kodwa kuthiwani ngemifanekiso ethile enemibala? Izinto zeAluminiyam Shinny zeplastiki zibhetele. Ungajonga umfanekiso ukuze ubhekiswe kuwo. I ...
Ukuprintwa kwephepha lesikhwama sephepha kwi-ANKE Ukupakisha
Ingxowa kukupakisha okusetyenziswa ngokubanzi kwiiMveliso ze-CBD. Imbewu, iintyatyambo, ukutya kunye nezinye iimveliso eziqinileyo, zonke ezi zinokupakishwa ezingxoweni. Indawo yengxowa yephepha yinto ebonakalayo. Nazi iinkcukacha zolu xwebhu: Ingxowa ngaphandle kokushicilela: Sinezinto ezinobungakanani bokuthengisa ubushushu bengxowa esitokisini ngalo lonke ixesha. Unako ...
Isirinji yeoyile epheleleyo ye-CBD
Iimpawu ezininzi ze-CBD zivelisa ioyile ephezulu ye-CBD ngoku. Unaso esi sicwangciso? Ezi mveliso zebakala liphezulu zinokupakishwa kwindawo yokupakisha ephezulu. Isirinji yeLuer Lock yeyona ndlela ilungileyo. Isirinji yethu yenziwe ngeglasi, inobuhlobo kunye nokusingqongileyo. Izinto eziphathekayo zikubakala lwezonyango. Ungapakisha nayiphi na ...
Iphepha lePhepha leBhotile ye-CBD
Phrinta i-Hemp kwikepusi ye-CBD Jar-ANKE Ukupakisha
Ukuza kuthi ga ngoku, besithetha ngodidi lwekepusi nganye engqeleni ye-CBD. Kukho isiciko se-bamboo, ikeplastiki kunye ne-aluminium. Sithethe nangombala wekep cap. Kwikepusi ye-bamboo, sinokwenza u-bamboo omnyama, uqalo olukhanyayo. Kwaye ikepusi yeplastiki, singatshintsha umbala ohlukileyo. Ikepusi aluminiyam ungenziwa ngemfuneko t ...
Ukubuyiselwa kuHEMP kunye ne-CBD EXPO
Ngenye imini kude nomboniso! Ngaba uwulungele umboniso currently Sithetha nje silungisa indawo yethu yokulungiselela kwaye silungiselela iimveliso oza kuzindwendwela. Zonke iimveliso ziya kuboniswa: ibhotile yeplastiki / yeglasi yeglasi ye-CBD, iiplastikhi / iingqayi zeglasi ezine-cap cap, ikepusi engangenisi mntwana, ikepusi ye-aluminium, ityala lealuminiyam kunye ...
Kukho ingqayi eyahlukileyo ethelekiswa neentsuku ezininzi ezidlulileyo kwizinto zokwenza izinto. Sineesayizi ezahlukeneyo zale ingqayi. Ikepusi ingqayi cap ikepusi, kukhuseleko ngakumbi ebantwaneni. Kwaye kukwayinto enkulu kwiimarike ze-CBD. Imibala yamkela inkonzo yesiko. Ngaba ufuna ukufunda okungakumbi ngembiza? Ilinde f ...
Iibhotile zePop ngeCap-HEMP kunye ne-CBD Expo
IPlastiki engakhuselekanga i-Vial-HEMP kunye ne-CBD EXPO
Sathetha ngeplastikhi okokugqibela. Kukupakisha okungangenisi mntwana kwiiMveliso ze-CBD eziqinileyo. Sinokunye ukupakisha kwimveliso eQinisekayo yeBhanti yomntwana. Sine-30ml, 50ml, 60ml, 80ml, 120ml, 160ml, 240ml igutyana onokuyikhetha. Unokupakisha imbewu, iintyatyambo okanye ezinye iimveliso eziqinileyo kule bhotile. I c ...
Ingxowa ye-HEMP kunye ne-CBD engakhuselekanga umntwana
Ngexesha lokulungiselela i-CBD EXPO, thina ANKE Ukupakisha (www.ankepacking.com) sikwanxibelelana nomenzi othile we-CBD ukuze afunde ukuba yeyiphi into ayipakishayo, kunye nokuba bafuna ukufumana ntoni. Uninzi lwazo luye lwasixelela ukuba lukhetha ukupakisha ngaphandle kokukhusela abantwana. Iya kuba lukhuseleko ebantwaneni, kwaye oku kuya kuba sisiqhelo ...
I-10ml yeplastiki yeBhotile ye-CBD-HEMP kunye ne-CBD EXPO
Ibhotile yeglasi ye-CBD-HEMP kunye ne-CBD EXPO
Ngaba uxakekile ulungiselela i-HEMP kunye ne-CBD EXPO. Namhlanje, sigqibile ukwenza uluhlu lwesampulu. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yeyiphi eyona nto siyilungiselela le EXPO? Ibhotile yeglasi ye-CBD ejikelezileyo. Silungiselela i-10ml, 15ml, 30ml, 60ml, 100ml kunye neebhotile eziyi-120ml. Ngombala, sicacile, luhlaza okwesibhakabhaka, amber, luhlaza, matt bl ...
Iplastiki yeJar-HEMP kunye ne-CBD Expo